गरिबका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयको यस्तो बिजोग ! « Khabarhub
गरिबका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयको यस्तो बिजोग !
जनकपुरधाम– नजिकमा दुई वटा पोखरी छन् । मठमन्दिर पनि छन् । ठाउँ रमणीय छ । गङ्गा सागर र धनुष सागर पोखरीको डिलमा साघुरो बाटो छ । दिनको करिब दुई बजेको छ । साँघुरो बाटोमा नाक थुनेर कोही पिसाब फेरिरहेका छन् भने कोही ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । साँघुरो बाटो स्थानीय व्यापारीका लागि पिसाब फेर्ने ठाउँ बनेको छ ।
त्यही बाटोको छेउमा, पोखरीको डिलमा एउटा विद्यालय छ । विद्यालयमा विद्यार्थीको चहलपहल छैन । उपस्थित शिक्षकहरू दक्षिणतर्फको चौरमा घाम तापेर बसेका छन् । केही कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरू खेल्दै छन् । कुनैमा शिक्षक पढाउँदैछन् । नजिकैको साँघुरो बाटोबाट दिसापिसाबको दुर्गन्ध सोझै कक्षा कोठामा पुग्छ । शिक्षक र विद्यार्थीको अनुहारमा दुर्गन्धको छनक प्रष्टै देखिन्छ ।
यस्तो दृश्य हो, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ स्थित राजर्षि जनक राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको ।
कुरा गत साताको एक दिनको हो । प्रधानाध्यापक वनारसीदेवी तीन दिनदेखि विदामा छिन् । शिक्षक अनिता ठाकुरका अनुसार विद्यालयमा कुल ११२ जना विद्यार्थी भर्ना भएको तथ्यांक छ तर आज १७ जनामात्र उपस्थित छन् । कक्षा दुईमा आठ जना, तीनमा तीन जना, चारमा दुई जना र कक्षा पाँचमा पाँच जनागरी १७ जना देखिए । शिशु कक्षा र कक्षा एक रित्तै थिए ।
‘पहिले यहाँ विद्यार्थीको ताँती लाग्थ्यो । कोरोना र प्राइभेट विद्यालयका कारण विद्यार्थी आउँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘अहिले यो विद्यालयमा स्थानीयलआफ्ना छोराछोरी पढाउँदैनन् । यहाँ प्रायःजसो बाहिरबाट आएर ज्यालामजदुरी गर्ने र फुटफाथमा पसल थाप्नेका बालबालिकामात्र आउँछन् ।’
शिक्षक १३ जना
विद्यालयको विवरणमा ११२ जना विद्यार्थी भर्ना भएको देखिए पनि कोरोना भाइरसको बन्दाबन्दीपछि विद्यालय खुल्दा दैनिक २५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी उपस्थित छन् । विद्यालयमा ८ जना स्थायी, ४ जना राहत, १ बालविकास गरी १३ जना शिक्षक र एक कार्यालय सहायक कार्यरत छन् । सरकारी प्रावधानअनुसार तराई क्षेत्रमा एक शिक्षक बराबर ५० जना विद्यार्थी हुनुपर्छ । यस हिसाबले राजर्षि जनक प्राथमिक विद्यालयमा ६५० जना विद्यार्थी हुनुपर्ने हो ।
शिक्षक रामवरण दासका अनुसार अभिभावकहरूमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर राम्रो छैन भन्ने मानसिकता बनेको छ तर वास्तविक अवस्था त्यस्तो होइन । अभिभावकको मानसिकता परिर्वतन नभएसम्म सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या नबढ्ने उनको ठहर छ ।
अधिकांश अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा भर्ना गरेका छन् । दासका अनुसार राजर्षि जनकमा करिब पाँच वर्षयता विद्यार्थी संख्या घटदै गएको छ । उपस्थित विद्यार्थीहरू पनि दिउँसै भाग्ने गरेका छन् ।
‘विद्यालयमा दलित समुदायका विद्यार्थी पढ्छन्,’ दासले भने, ‘उनीहरू फुर्सदको बेलामात्र आउछन् । दलित समुदायमा पनि अत्यन्तै गरिब अभिभावकका बालबालिका छन् ।’ उनका अनुसार विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरू मजदुरी गर्न जान्छन् ।
प्रकाशित मिति : ९ माघ २०७७, शुक्रबार २ : २५ बजे